सुत्नेबेला सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि भोलीको राशिफल पढ्नुहोस् । – Khabar Silo
आज २०७७ पुस २१ गते मंगलबारको राशिफल
Posted on January 5, 2021 Author khabar silo
आज २०७७ पुस २१ गते मंगलबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष मन चञ्चल हुनेछ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । आर्थिक क्षेत्र सवल रहनेछ […]
पशुपति नाथले सबैको रक्षा गरून्, ११ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) हाड जोर्नीको समस्याले निकै सताउनेछ । आर्थिक कारोबारमा पनि समस्या आउनेछ । धार्मिक कार्यमा खासै रुचि नहोला । अरुको विश्वास सजिलै जित्न सकिनेछ । बौद्धिक कार्यमा तीब्रता आउनुको साथै जोश जाँगर बढ्ने छ । हातमा आएको प्रतिफल गुम्न सक्छ । बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) शैक्षिक उन्नतिका अवसरहरू प्रशस्तै मिल्नेछन् । विवाहितहरुको दाम्पत्य जीवन सुख’मय रहनेछ […]